Amboary amin'ny Internet ny Infographic Google Analytics anao. Martech Zone
Amboary amin'ny lafiny maso ny Google Analytics Infographic-nao
Sabotsy, Martsa 23, 2013 Douglas Karr
Tianay ny Visual.ly amin'ny fikarohana sy fizarana infografika. DK New Media dia mpamorona voamarina amin'ny Visual.ly, miaraka amina taonina misy infografika lehibe nohadinihinay, noforonina ary natombokay ho an'ny mpanjifanay.
Ary koa ny infografika static, ny ekipa Visual.ly dia manohy manatsara ny infografika mavitrika ihany koa… jereo ity tsara ity Google Analytics infographic izay misarika ny statistika isan-kerinandro ho amina endrika tsara tarehy. Azonao atao aza ny mandefa ny infografika aminao amin'ny alàlan'ny mailaka isan-kerinandro. Milay loatra!
Tags: Google Analyticsgoogle analytics infographicSary torohayinfographic interaktifMarketing Infographicsvisual.lyhita maso
Zava-potoana amin'ny fahamarinana: Dingana 8 mankany amin'ny fahavonona
Mar 25, 2013 amin'ny 8: 15 AM
Tena tsara izany. Efa elaela aho no nampiasa Visual.ly ary ity dia iray amin'ireo fiasa izay tena tsara. Izy io dia mety hanana endrika malaza. Tena tsara tarehy fotsiny io ary tena tsotra ampiasaina. Misaotra nizara taminay ry Douglas.
Mar 25, 2013 amin'ny 8: 16 AM
Manaiky aho, Michal! Manantena aho fa hanitatra ny foto-kevitr'izy ireo ihany koa.
Mar 25, 2013 amin'ny 9: 48 AM
TIA ANAO! Misaotra nizara, Douglas.